Superfoods iwe yaunofanirwa kuisa mune yako yekudya | Bezzia
Superfoods iyo iwe yaunofanirwa kuisa mukati mekudya kwako
Toñy Torres | 14/09/2021 20:00 | Matipi ehutano
Kana zvasvika kune zvinovaka muviri uye chikafu, haugone kutaura kuti zvese zvakanyorwa. Nekuti, nerombo rakanaka, zuva rega rega kutsva kutsva uye zvidzidzo zvine chekuita nechikafu uye kuti izvi zvinotikanganisa sei mukati. Zvinotaridza kuti zvese zvinomedzwa zvinokanganisa neimwe nzira kana imwe. Uye nenzira imwechete iyo zvimwe zvekudya zvinokuvadza kuhutano, zvimwe zvinonyanya kuzvifarira.
Zvimwe zvekudya zvine zvinhu uye zvinovaka muviri zvinobatsira kusimbisa immune system. Chii chakakosha kuchengetedzwa kubva kumavirusi, mabhakitiriya uye marudzi ese ezvirwere. Izvi zvekudya zvinodaidzwa kuti "superfoods" uye vanozvisanganisa mukudya nguva dzose, inogona kukubatsira iwe kuva noutano, kusimba uye kudzivirirwa kubva mukati.
1 Ndezvipi superfoods
2 Zvikafu zvepamusoro zvinofanirwa kunge zviri mukudya kwako
2.1 Acai michero
2.2 Chia mhodzi
2.3 Matcha tii
Kunyangwe ivo vava ivo vane fashoni kwemamwe makore ikozvino, superfoods hachisi chinhu chitsva. Zvakawedzera, ndizvo zvekudya izvo zvatove chikamu chekudya kwedu kweMediterranean, zvakadai samafuta omuorivhi. Nekudaro, izvo zvinonyanya kuzivikanwa se superfood imbeu, michero uye zvekunze zvekudya, ndizvo zvinoita kuti zvive zvakakosha uye zvisinganzwisisike kune vakawanda vanofa.
Izwi rekuti superfood harina hwaro hwesainzi, asi inogamuchirwa nekuti dudziro yacho iri yechokwadi maererano nehutano hwezvikafu zvinowira mukati meiyo rondedzero. Sezvo superfoods chiri chikafu chine hwakakosha hutano hwakakosha hunopa hukuru hutano mabhenefiti, senge antioxidants, mavitamini, kana mafuta ane hutano.
Zvikafu zvepamusoro zvinofanirwa kunge zviri mukudya kwako
Iyo rondedzero yezvikafu zvepamusoro zviri kuwedzera uye zvakanyanya kuwanda, nekuti izvo zvigadzirwa zvinouya kubva ku organic kurima kusvika padanho rakakura uye nekuwedzera uye makambani ari kutsigira zvakanyanya zvakasikwa uye zvine hutano chikafu. Zvino, zvinofanirwa kuyeukwa kuti chikafu chega hachina kugona kuvandudza hutano. Kudya kune hutano kunofanirwa kuve kwakaringana, zvakasiyana uye zvine mwero. Kana iwe zvakare uchisanganisira izvi superfoods, muviri wako unozobatsirwa kubva kune ese masitendi.
Chibereko ichi chakafanana neblueberry ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kubatsira pahutano nekuda kwehuwandu hwayo hwe antioxidants. Zvakare, açaí michero iri yakafuma mu omega 3, 6 uye 9 fatty acids, yakakosha amino asidhi yakakosha kwazvo kune hutano. Pakati pezvakawanda zvoutano zvivakwa, açaí michero yakanaka yekusimbisa immune immune, kurwisa zvirwere zvakaita segomarara uye, ivo vanoti, kune hutano hwepabonde.
Pamwe imwe yeanonyanya kuzivikanwa superfoods kubvira kwevamwe makore chia mbeu dziri kuramba dziripo mumakicheni evose avo vanotsvaga kugadzirisa hutano. Iyo imbeu izere nezvinhu zvinobatsira kwazvo, pakati pavo, yakapfuma mune yakakosha mafuta acids, calcium, magnesium uye yakakwira fiber zvemukati. Idzi mhodzi dziri zvakanakira ura kufamba, moyo, chirwere cheshuga kana cholesterol, pakati pevamwe.
Ichi chikafu chepamusoro chinogona kutorwa sechakakosha, nekuti nekuda kwezvakawanda zvaro chimwe chezvinhu zvinonyanya kubatsira pahutano. Matcha tii haisi chimwe chinhu kunze kwerudzi rweiyo girini tii inosanganiswa nemvura, ndiko kuti, shizha rose rinodyiwa uye kwete kungoiswa infusion, iyo inowedzera zvivakwa. Antioxidant ine simba inodzivirira kukwegura kwemaseru, pakati pezvimwe zvakawanda zvakanaka zvehutano.
Iyi zvinonhuwira zvinouya kubva pamudzi wemhuri yeginger, inoonekwa sechisimba inorwisa-kuzvimba. Izvo zvakanaka kune moyo, ndizvo anti-kupisa, antioxidant uye yakanaka mukudzivirira uye kurapwa kwemamwe marudzi ekenza.
Izvi ndizvo zvezvimwe zvakakosha zvekudya zvepamusoro zvinozivikanwa, kunyange zvisiri izvo chete. Kunyangwe zvichinyanya kukosha kuti chikafu ichi chakabatanidzwa mukudya nenzira yakaenzana. Sezvo ipapo chete ndipo panogona kuzadzikiswa zvese zvayo zvivakwa nehutano. Nekuti zvakakosha kuyeuka izvo mbiru dzehupenyu hune hutano kudya, kurovedza muviri uye tsika dzakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Matipi ehutano » Superfoods iyo iwe yaunofanirwa kuisa mukati mekudya kwako
Exercises uye anotambanudzira kune mutsipa